कथा : मेरी प्राप्ति::Nepali News Portal from Nepal
कथा : मेरी प्राप्ति
एउटा संयोग थियो त्यो – मेरो त्यो होटलमा बसाइ हुनु अनि उसको मेरै कोठाको हेरविचार गर्ने जिम्मा पर्नु।
‘हाउस किपिङ हाउस किपिङ’ भन्दै कसैले ढोका ढक्ढकायो।
‘कम इन,’ भन्दै मैले भित्र आउने अनुमति दिए तर मेरो आँखा भने कम्प्युटर मै थियो।
‘गुड मर्निङ म्याम,’ ऊ भन्दै थिइ, ‘मीठो मसिनो स्वरमा। अनायास म उसको बोलीले आकर्षित भए। कानमा उसको स्वर मीठो लाग्यो मलाई। कता सुनिरहेको जस्तो, कोही आफ्नैको जस्तो थियो त्यो स्वर। मैले टाउको उठाएर हेर्दै ‘गुड मर्निङ’ भने।
ऊ मुसुक्क हाँस्दै, ‘उड यु माइन्ड मुभिङ अफ द बेड? आइ विल चेन्ज लिनिंन,’ भनी।
उसलाई देखेर म उत्साहित भएँ। म खुसी हुँदै ‘यु मस्ट बि नेपाली’ भने।
उसले ‘नो’ भन्दै मसँग आँखा नै नजुधाई मलाई अलि बेवास्ता गरे झैं गरी बाथरूमतिर पसी। उसको बोलीमा मलाई सत्यताको महशुस भएन। मलाई विश्वास थियो। ऊ नेपाली नै थिइ। सायद उसले चिनिन नचाहेको होला भने झैं लाग्यो। मनमा दु:ख लाग्यो, मैले फेरि उसलाई दोहोर्‍याएर सोधिनँ।
‘प्राप्ति?’ ‘यु आर नेपाली, आरन्ट यु?’ म भनें।
‘आइ डोन्ट नो यु बट हाउ डु यु नो माइ नेम?’ उ छक्क परेर सोध्छे।
उसको प्रश्नलाई बेवास्ता गर्दै ‘आइ हर्ड यु टकिङ इन नेपाली, आइ एम नेपाली टु’, मैले भने तर उसले कुनै उत्सुकता देखाइन।
मैले उसलाई नेपाली मै सोधें ‘बैनी कहाँ बस्नु हुन्छ ?’
‘यतै सिटीतिर,’ उसको जवाफ छोटो थियो, पक्कै ऊ मसँग कुराकानी गर्ने मुडमा थिइन तर मैले कुरालाई निरन्तरता दिएँ।
‘तपाइलाईं मैले हिल्टन होटलमा भेटेको थिएँ। बिर्सिनुभयो जस्तो छ बैनीले,’ मैले भने, ‘अझै काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यस होटलमा ?’
‘काम गाह्रो भयो।’
पक्कै होटलको काम गाह्रो थियो। मलाई त्यति खेर नै लागेको थियो कि यस्तो सुकुमारी केटीले त्यस्तो शारीरिक काम कसरी गर्छे होला भनेर। जे होस्, मैले विषयवस्तु बदलेर उसलाई फेरि सोधें, ‘कैले आउनुभएको बैनी नेपालबाट ?’
‘एक वर्ष अलि बढी भयो।’
‘नयाँ नै हुनुहुँदो रैछ सिड्नीमा,’ मैले भने। ऊ चुप लागि।
‘बैनीको नेपालमा घर चाहिँ कहाँ ?’
‘म यहाँ भन्दा झन्डै दुई घण्टा पर, ब्लु माउन्टेन नजिकै बस्छु,’ मैले आफैं भने।
‘धेरै वर्ष भयो म यहाँ आएको। मेरो नेपाली साथीभाइ कोही छैन। बैनी नेपाली भन्दा सारै खुसी लाग्यो।’
‘नेपाली साथी त नभएकै राम्रो। नेपालीलाई नाचिनेकै जाति। नेपालीले नेपालीलाई ठग्छन् यहाँ, लुट्छन्। चिनेर के फाइदा? कसैलाई नचिनेकै बेस’, ऊ भन्छे।
‘किन? के भयो र? बैनीलाई कसैले ठग्यो ?’
‘मलाई भने हुन्छ। मलाई तिमीले आफ्नो दिदी जस्तो मानेर सबै कुरा शेयर गर्न सक्छौ। तिमीलाई देखेदेखि किन किन मलाई तिमीमा आफ्नो विगत याद आउँछ। म पनि सायद तिम्रै उमेरको थिएँ यहाँ आउँदा। यस्तैगरी एक्लै यहाँ आएर बस्थे, ऊ त्यो बेञ्चमा। त्यसैले यो ठाउँ अनि त्यो बेञ्च मलाई सारै प्यारो छ,’ भन्दै मैले आफू अघि बसेको बेन्चलाई औंलाले देखाउँदै भने।
‘तिमीलाई म देखेर अचम्म लाग्यो होला’, मैले भने, ‘स्वभाविकै हो। म तिम्रो लागि एक अजनबी हुँ। तर मसँग डराउनु पर्दैन। म तिमीलाई हानी हुने केही काम गर्दिनँ भन्दै उनलाई विश्वास दिलाउन खोजें।
‘हैन, त्यस्तो हैन। म नचिनेको मानिसलाई विश्वास गर्न अलि हिच्किचाउने भएकी छु यो देशमा आएदेखि, त्यसैले,’ ऊ भन्छे।
मैले आफ्नो पर्सबाट मेरो बिजिनेस कार्ड निकालेर उसलाई दिँदै भने, ‘ठीकै छ, म तिमीलाई मसँग नजिकिन जोड गर्दिनँ। तर कुनै दिन मसँग कुरा गर्न मन लाग्यो भने यसमा मेरो नम्बर छ। मलाई जतिखेर फोन गरे पनि हुन्छ।’
‘हजुरको नाम एकदम राम्रो लाग्यो, म हजुरलाई निधि दिज्जु भनुँ? यदि माइन्ड गर्नु हुन्न भने, भन्दै ऊ मुस्कुराउँछे।
‘नट आय्ट अल, ड्याट वुड बि सो नाइस,’ मैले भने।
‘तिमी किन यस्तो चुपचाप र निराश देखिन्छ्यौ? सबै ठीक छ तिमीलाई?’ मैले सोधें।
‘मलाई फोन गर्न नभुल्नु नि,’ मैले चिच्याएर भने।
सुन्दर भविष्यको मिठो सपना बोकेर पढ्न आएकी प्राप्तिलाई विभिन्न लोभ र लालच देखाई लुट्ने ठगहरूलाई कसले सजाय दिने ?
उनलाई चिन्ने र उनीसँग मित्रता बढाउने मेरो इच्छा अधुरै रह्यो। मन भरंग हुन्छ, नमीठोसँग दुख्छ, अनि म फेरि उसको फोटोमा हेरेर टोलाउँछु, अनि सोच्छु- ऊ मेरी प्राप्ति, मेरो माटोको मायामा, मेरो भाषाको मायामा बनेकी मेरी बैनी, उसले जीवनको मूल्य बुझेकी भए, आफ्नो जीवनको माया गरिदिएको भए।